गठबन्धनमा दम्भ देखिएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले कसलाई दिइन यस्तो कडा चेतावनी ? — Sanchar Kendra
गठबन्धनमा दम्भ देखिएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले कसलाई दिइन यस्तो कडा चेतावनी ?
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेता रामकुमारी झाँक्रीले चुनावी गठबन्धन सन्तोषजनक र सम्मानजनक नभएको बताएकी छन्। केही जिल्लाहरूमा एकीकृत समाजवादीविनै चुनावी तालमेल भइरहेका छन्।
त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले गठबन्धन सम्मानजनक नभएको बताएकी छन्। उनले गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूका बीचमा पनि हार्दिकतापूर्ण वातावरण नबनेको बताएकी छन्। वार्ता र संवादमा दम्भ देखिएको उनको भनाइ छ।
गठबन्धनभित्रकै केही नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा यसको एकदिन हिसाव मिलान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताएकी छन्। साथै यसको हिसाबकिताब गर्ने उनले चेतावनी दिएकी छिन ।
‘गठबन्धन सन्तोषजनक र सम्मानजन भएन। गठबन्घनका दलहरूको बीचमा हामीले आफैँभित्र पनि हार्दिकतापूर्ण वातावरण बनाउन सकेनौँ,’ मन्त्रीसमेत रहेकी उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, ‘हाम्रा वार्ता सम्वादमा केही दम्भ देखियो। यो बीचमा गठबन्धनका केही नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ एक दिन यसको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने छ। बस!’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज सोमबार पनि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । आइतबार मनोनयन दर्ता सुरु भए पनि न्यून मात्रामा उम्मेदवारी परेको छ ।
साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराए पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले धेरैजसो ठाउँमा आज मनोनयन दर्ता गराउँदैछन् ।
७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि मनोनयन दर्ता हुने भए पनि आइतबार १० हजार ५ सय २३ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ ।
मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची आजै साँझ प्रकाशन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले मनोनयन सकिएपछि सोमबार नै उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गरिने बताए । सूची प्रकाशनपछि भने १३ वैशाखमा उम्मेदवारविरुद्ध दाबी–विरोध गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ ।
१४ र १५ वैशाखमा मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र परेका उजुरीको जाँच बुझ गरी निर्णय गर्ने, १५ गते नै उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ वैशाखमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १७ वैशाखमा उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ ।